Tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fifidianana: tsy hanaiky ireo mpitatitra mpikamban’ny MAMA - ewa.mg
News - Tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fifidianana: tsy hanaiky ireo mpitatitra mpikamban’ny MAMA
Tsy hanaiky hatramin’ny farany ireo mpitatitra mpikambana ao amin’ny Mutuelle d’assurance Malagasy (MAMA) raha tsy mametra-pialana ireo mpikambana ao amin’ny filankevi-pitondrana voafidy ny taona 2018. Tokony hohajaina ny lalàna sy ny sata mifehy ny mpikambana hampirindra ny fitantanana ny asa rehetra. Voalazan’ny mpitantana ny MAMA fa ara-dalàna ny fanatanterahana ny fifidianana ary nanaraka ny fenitra. Mangataka ny lisitr’ireo olona mpitatitra nandeha nifidy tany Nosy Be ny mpitatitra hanamarinana ny maha ara-dalàna ny voka-pifidianana. Mitaky ny hamerenana ny fifidianana rahateo izy ireo ka ny mpitatitra no hisahana ny andraikitry ny filakevi-pitondrana fa tsy olona havan’ny mpitantana teo aloha. Mbola handefa taratasy fampahafantarana ny olana misy ao anatin’ny MAMA ny mpitatitra satria efa voaangona ny sonia an’ireo mpikambana tsy manaiky ny tsy fanarahan-dalàna.
Tokony handray ny andraikiny ny minisitera misahana ny trano fiantohana ary mila mametra-pialana hatramin’ny faran’ny herinandro ireo mpikambana enina tsy manara-dalàna amin’ny filankevi-pitondran’ny MAMA. Nitondra ny porofo manamarina ny tsy maha ara-dalàna ny fifidianana ny mpitatitra, omaly teny Ankazomanga.
L’article Tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fifidianana: tsy hanaiky ireo mpitatitra mpikamban’ny MAMA a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 03/08/2019
Fidinana ifotony: nihaino ny olan’ny any Imady ny minisitra Vahiniala
Misedra olana amin’ny faharatsian’ny lalana ny ao Ambositra mihazo an’Imady (12 km) sy Ambositra – Kianjandrakefina (32 km), indrindra amin’izao fotoam-pahavaratra izao. Tafakatra 15.000 Ar ny sarandalana (Kianjandrakefina – Ambositra) raha tokony ho 5.000 Ar izany. Nahita maso izany ny minisitra mpiahy, Raharinirina Baomiavotse Vahinala, tamin’ny fitsidihana tany an-toerana, ny herinandro teo. Nihaino ny hetahetan’ireo olomboafidy tany Imady Ala ny tenany. Nentaniny ireo mpitantana eny ifotony ny amin’ny hanantanterahana ny drafitra fanandratana an’i Madagasikara “Plan d’emergence de Madagascar – PEM” ka nandinihana ny hampandrosoana an’Imady Ala. Niraisan’ireo ben’ny Tanàna hevitra koa ny momba ny fotodrafitrasa, indrindra ny fampianarana sy ny fahasalamana. Eo koa ny herinaratra na fanazavana mandeha amin’ny herin’ny masoandro.Manohana ny ezaka ataon’ny minisitraSamy naneho ny fahavononana ireo olomboafidy amin’ny hirosoana amin’ny PEM ary manantena fa mba hihiratra ny masoandron’ Imady Ala. Notohanan’izy ireo koa ny ezaka ataon’ny ministra Raharinirina Vahiniala sy ny minisitry ny Fitsarana, Andriamahefarivo Jhonny, mpitondra ambony zanak’Imady Ala.Nanentana ireo olomboafidy handray anjara feno amin’ny fifidianana loholona ny minisitra tamin’izany. Nihaona tamin’ny mponin’i Kianjandrakefina koa ny minisitra ka nanamarihany fa neken’ny fitondrana ny hametrahana biraon’ny Paositra ao an-toerana sy ny nanampiany ny Vondron’olona ifotony (VOI) sy ny fikambanam-behivavy. Niara-dia tamin’ny ny mpanolotsainy sady zanak’Imady Ala, Ramarosaona James.Synèse R.L’article Fidinana ifotony: nihaino ny olan’ny any Imady ny minisitra Vahiniala a été récupéré chez Newsmada.
La fête continue avec Jean-Aimé Ambiance « mafana » chez Le Glacier ! Car il vaut mieux battre le fer tant qu’il est encore chaud. Jean Aimé revient en terre conquise au Glacier Analakely. Histoire de bien démarrer l’année, le chanteur donne rendez-vous aux noctambules pour ce tout premier vendredi de 2021. Pour ce faire, les habitués des lieux auront de la musique sur laquelle danser à fond et continuer la fête. Evidemment, l’ambiance est prometteuse avec L’interprète de « Par silence » aux commandes. Les chants des îles résonneront donc en misant sur le séga maloya et bien sûr la musique du terroir. Un bon cocktail musical qui lui réussit depuis des lustres. Optimiste et positiviste de sont état, Jean Aimé ne cesse d’encourager comme c’est le cas dans « Toujours en avant », l’un de ses titres l’année dernière. En même temps, il aborde également des faits de société plus sérieux dans « Mila Sakafo ». Que ce soit sur « par silence » ou son fameux « Andrasako foana anao chérie » et ses autres morceaux, Jean Aimé fera montre, pour la énième fois, de son talent de metteur d’ambiance jusqu’au petit matin. Avec ce look atypique allant des cheveux oranges aux chemises fleuries ou les accessoires bling bling quand cela lui chante, le tape à l’œil reflète exactement le zouk-love qu’il a choisi comme genre de musique par excellence. Néanmoins, le chanteur ne se cantonne nullement à un seul genre. Tout ce qui fait bouger, il est preneur. Pour les inconditionnels, ceci sera sûrement parmi les moments à ne rater sous aucun prétexte. Zo Toniaina L’article Glacier : Jean Aimé en terre conquise est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Glacier : Jean Aimé en terre conquise a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Miantso ny tompon’andraikitra hanampy azy ireo ny Fikambanana tantsaha vanilla (Fitava) any amin’ny distrikan’i Mandritsara amin’ny ady atao amin’ny halatra lavanila. Efa miroborobo ny fikambanana ka izao mangataka fanampiana hiadiana amin’ny mpangalatra izao, mangataka fanofanana ihany koa hanatsarana sy hampitomboana ny vokatra. Manana velaran-tany malalaka izy ireo, tokony hiavaka ny lavanila vokarin’ny Fitava. Marihin’ity fikambanana ity fa ambany dia ambany ny vidin’ny lavanila maitso amin’izao, 50 000 ariary ny kilao, antsasa-bidy mitaha ny tamin’ny herintaona. Noho izany, mila jerena ny lalam-barotra.Ezaka ataon’ny zandary any amin’ny faritra Androy ny fanaraha-maso sy fanadiovana ny bokin’omby. Tsy maintsy hanaovana bokin’omby ny omby iray vao teraka. Napetraka ho faritra fitaratra ny any Androy amin’ny fanavaozana isan-taona ny bokin’omby. Entanina ny tantsaha hanaja ny lamina sy ny fepetra rehetra ho an’ny omby ompiana na omby amidy. Midina hatrany amin’ny fokontany ireo mpitandro filaminana misava ny bokin’omby. Nisy fikaonan-doha tamin’ireo ben’ny Tanàna mitantana kaominina 58 ao amin’ny faritra. Nanaiky izy ireo fa hanentana ny mponina.Nangonin’i MC L’article Vaovao tambatra a été récupéré chez Newsmada.
Lalàna ho an’ny fanoherana: miantso ny hevitry ny rehetra ny Antenimierandoholona
“Ny fanjakana ihany ve no hanao ny lalana ho an’ny fanoherana ? Nilaza ny fiarahamonim-pirenena fa tokony hisy ny fakan-kevitra ary mampirisika izahay mba hiantso ny mpanao politika eto amin’ny firenena na anaty fitondrana na tsia hiaraka hiady hevitra. Mba ho marim-pototra ny lalàna. Aoka isika tsy hanilika fa hivelatra eo amin’ny adihevitra hanatsarana ny firenena izany ary fototry ny demokrasia ”, hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, omaly tetsy Anosikely. Nisokatra, omaly koa ny fivoriana tsy ara-potoana ho an’ity Andriampanjakana ity ary anisan’ny lahadinika ny momba ny lalàna ho an’ny fanoherana sy ny fanoloran’ny governemanta ny fandaharanasa ankapoben’ny fanjakana (PGE). Nohitsiny fa tsy tokony ho endrika ivelany fotsiny ny fanekana ny fisian’ny mpanohitra. “Tsy hanongam-panjakana eny an-dalambe izy ireo fa ho arofanina ho an’ny fanjakana… Ilaina ny fifandimbiasam-pitondrana ka hokajina izany lalàn’ny fanoherana izany fa tsy ho fitaovana hampanginana ny tsy mitovy hevitra”, hoy izy.Nanombohan’ny lahateniny kosa ny fahasahiranan’ity Antenimierandoholona ity eo amin’ny vola, saingy nanteriny fa manaja ny ara-dalàna sy ny Repoblika izy ireo. “Nisy fahataran’ny vola avy any amin’ny minisitera, saingy niezaka izy ireo namaha ny olana”, hoy izy.Synèse R. L’article Lalàna ho an’ny fanoherana: miantso ny hevitry ny rehetra ny Antenimierandoholona a été récupéré chez Newsmada.
Andranomena : maty voatifitry ny polisy i Mena
Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ Ambanja, afakomaly, ny jiolahy raindahiny amin’ny vaky trano, izay fantatry ny maro amin’ny solon’anarana hoe i Mena. Nambaran’ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy fa jiolahy efa nokarohina hatry ny ela izy ity ary efa fantatry ny ankamaroan’ny olona any an-toerana. Efa natolotra ny fitsarana ao Morombe izy, ny 21 jona 2020 ka naiditra am-ponja vonji­maika. Halatra miaro famakian-trano no vitany tao amin’ny distrikan’i Manja. Olona maro­maro no efa nametraka fitoriana azy noho ny asa ratsiny. Maro ny asa ratsy efa vitany ka nandritra ny famotorana azy no na­nondroany ireo namany mpiara-manao asa ratsy aminy. Fantatra ao amin’ny fokontany Andrano­mena no misy ireo namany. Nanararaotra nitsoaka izy nandritra ny fisamborana ireto namany ka nitifitra ny polisy. Vokany, voatifitra teo amin’ny tongony ka tsy avotra intsony ny ainy. Isan’ireo jiolahy nampikaika ny mponina tany an-toerana ry Mena sy ny namany.J.CL’article Andranomena : maty voatifitry ny polisy i Mena a été récupéré chez Newsmada.
Literatiora – Tononkalo: mikasa hamoaka boky i Idealy Fahafahana
Miroborobo fatratra ankehitriny ny asa soratra. Mbola vitsy ihany anefa ireo mpanoratra mahatanteraka azy ireny ho boky. Hanao ezaka i Idealy Fahafahana. Eo am-piketrehana ny nahandro izy ankehitriny…Randriarinaivo Jean Yves Mamy, fantatry ny maro eo amin’ny tontolon’ny haisoratra amin’ny anarana hoe Idealy Fahafahana. Solonanarana azo adika amin’ny « fahatanterahana anivon-tsoratra », araka ny filazany. Ny fanoratana tononkalo ny tena ataony ao anatin’ny literatiora. Na izany aza, efa nahavita sombin-tantara vitsivitsy ihany koa ny tovolahy ary manoratra ireny fehezanteny misy isainana ireny na ny “citation” ireny. Ao anaty fiketrehana famoaham-boky tononkalo sy fanoratana tantara fandefa amin’ny radio i Idealy Fahafahana, ankehitriny. Ny hitiavan’ ny Malagasy rehetra ny teny malagasy sy ny kanto rehetra vita avy amin’ izany na hira io na tantara, indrindra ny tononkalo, ny tanjony eo amin’ ny literatiora malagasy.Ny tantara fandefa amin’ny radio no fomba mora hampitana haingana hafatra ho an’ny mpiara-monina, raha ny fanazavany hatrany. Manampy izay, manoratra tononkira ihany koa ny lehilahy. Enin-taona tamin’ ny 10 jolay 2020 teo ny naha Idealy azy, araka ny nambarany. Maro ny fiakarana an-tsehatra nataony, toy ny tao amin’ny Cemdlac Analakely, “Afom-poezia” 2016 ary tao amin’ny Tranomboky Anosy, ny “Anjoaniko ny teniko fa mamiko ny taniko”, ny taona 2017.Anisan’ ny efa nahitana ny sanganasany ihany koa ny Revio Tsara Soratra, laharana 002 sy 003, ny taona 2018. Ankoatra izay, fandaharana isan-karazany fandefa any amin’ny radio no efa nahenoana ny sanganasany. Anisan’izany ny fandaharana “Alimbetso” (Radio Don Bosco) sy ny “Korira Kanton’ny Haisoratra” (Aceem Radio)… “Efa anarivony ireo tononkalo efa vitako, ankehitriny. Ny nahatonga ahy nanoratra, ny fitiavana ny tononkalo, indrindra ho fijoroako amin’ny maha “izaho” ahy sy ho an’ ny firenena”, hoy i Idealy Fahafahana.Narilala L’article Literatiora – Tononkalo: mikasa hamoaka boky i Idealy Fahafahana a été récupéré chez Newsmada.
Filohan’ny HCC : “Misy fetrany ny fampielezan-kevitra mialoha”
“Na tsy misy lalàna mametra azy aza, misy fetrany ihany… Na tsy misy lalàna aza, mba misy fahatsiarovantena any amin’ilay kandidà. Tsy mety koa ny hoe ampanjaka na raiamandreny ara-drazana tena miantso hoe ity ny kandidàntsika. Ny dikan’izany: ity no fidintsika. Hafa ny hoe fanomezana tsodrano izay tsy olana.”Izay ny nambaran’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), Rakotoarisoa Jean-Eric, tao amin’ny RNM ny fiandohan’ny herinandro teo, momba ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Misy andininy manokana momba ny raiamandreny ara-drazana voasoratra ao amin’ny lalàna: tsy tokony hiantso mpifidy ho an’ny kandidà iray fa aleo haneho ny safidiny ny olona. Misy efa tena manao fampielezan-kevitraNy olana amin’izao, araka ny fanazavany: misy efa tena manao fampielezan-kevitra. Afa-miseho amin’ny olona hoe kandidà ny tena fa tsy ampy ny telo herinandro hanazavana ny programa. Azo atao izay fa ny fiantsoana olona hifidy ny tena no tsy azo atao. Nefa misy efa tena petadrindrina mivoaka, misy ny sarina kandidà sy ny laharany. Ao ny manana endrika biletà mivoaka an-gazety. Efa fampirisihana ankolaka hifidy ny tena izany. Misy efa manao dokambarotra, araka ny itenenana azy, amin’ny haino aman-jery tsy miankina.Hisy ny fampitandremana amin’ny fampielezan-kevitraRehefa ho avy ny tena fampielezan-kevitra, hisy ny fampitandremana atao amin’ny tsy fanarahan-dalàna. Amin’izao fotoana izao, misy ny fampahatsiahivana ataon’ny HCC sy ny Ceni hoe tokony hahatsiaro tena ny kandidà.“Ny zavatra teneniko sy averimberiko matetika hoe: izany kandidà solombavambahoaka izany, tokony ho modely eo amin’ny fiarahamonina. Amin’ny fitondrantena izany ka tsy hangalatralatra, tsy handika lalàna… “, hoy izy. Hanao lalàna ve ny tena, vao kandidà aty dia efa manondrana sy tsy manara-dalàna sahady?Tokony mba hieritreritra ihany ny kandidà solombavambahoaka fa mety hotsarain’ny olona amin’ny fifidianana. Avy eo ny sazy, rehefa ho tonga ny aty amin’ny HCC: hijery ny valim-pifidianana na hisy fitoriana na tsia, raha tena misy ny tsy fanarahan-dalàna sy raha tena hita hoe misy fiantraikany amin’ny valim-pifidianana izay zavatra izay. Mety hisy fiantraikany ihany koa amin’ny olona tsy nanaraka ny fepetra sy ny lalàna tokony harahina izay.R.Nd. L’article Filohan’ny HCC : “Misy fetrany ny fampielezan-kevitra mialoha” a été récupéré chez Newsmada.
Taolagnaro: hiakatra fampanoavana ilay zandary nanolana ankizivavikely
Henoina ao amin’ny tribonalin’ny Tolagnaro androany ny raharaha fanolanan-jazavavikely 13 taona tao an-toerana, ny alarobia lasa teo. Voasaringotra ao anatin’izany ny zandary iray mpiambina ny « Centre de traitement Covid-19 » ao an-toerana.Araka ny angom-baovao, nandeha nantsaka ilay ankizivavikely, ny harivan’ny alarobia teo manodidina ny tamin’ny 04 ora. Efa niambina azy tsy lavitra teo ihany koa ilay zandary mpiambina. « Mamo tanteraka ilay zandary hors-classe io ka nibata azy nakao ao amin’ilay Centre. Tao ihany koa ny nanaovany ny filan-dratsiny tamin’ ilay ankizivavikely », hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray ao an-toerana. Maro anefa ny naheno ny herisetra nahazo an’ilay ankizivavy, saingy tsy nisy nahita.Taorian’ny zava-nahazo azy, nitantara ny nahazo azy tamin’ny fianakaviany ilay ankizivavikely. Nisokatra tamin’izay ny fanadihadiana. Nentina namonjy toeram-pitsaboana ihany koa izy ary voamarina tokoa ny herisetra ara-nofo nahazo azy. « Ankehitriny, manaraka fitsaboana ilay ankizivavikely, saingy simba tanteraka ny fitaovam-pananahany », hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana.Henintsoa HaniL’article Taolagnaro: hiakatra fampanoavana ilay zandary nanolana ankizivavikely a été récupéré chez Newsmada.